» प्रहरीलाई छलेर हतकडीसहित दुई थुनुवा अदालतबाटै फरार
सोमबार, १७ फाल्गुण २०७७
निजगढ युवा क्लव ए तेस्रो निजगढ मेयर कप फुटबलको उपाधि जित्न सफल
हेटौंडा मेयर कप : वडा नं. ४ र ७ बिजयी
म्यानेजमेन्ट ‘बि’ बिरुद्ध प्राइभेट टिम ३–१ गोल अन्तरले बिजयी
काठमाडौँबाट बाघको छालासहित एक जना पक्राउ
पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा ४ संगठनले सहकार्य गर्ने
प्रहरीलाई छलेर हतकडीसहित दुई थुनुवा अदालतबाटै फरार
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १०:५३
मोरङ । लागुऔषध मुद्दामा म्याद थप गर्न लगिएका दुई जना थुनुवा प्रहरीलाई छलेर जिल्ला अदालत मोरङ परिसरबाटै हतकडीसहित फरार भएका छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मोरङको कटहरी कटहरी गाउँपालिका–४ का ३७ वर्षीय मुराज भनिने मनराज शेख र झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ का २० वर्षीय प्रकाश चौधरी म्याद थप गर्न लिएर गएको प्रहरी टोलीलाई झुक्याएर भागेका हुन्।
सोमबार दिउँसो ३:३० बजेतिरै उनीहरु फरार भएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा भने घटनाका बारेमा साँझ ६ बजेतिर मात्रै जानकारी गराइएको थियो। सुरुमा सबैतिर खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि घटनाको जानकारी गराएको बताइएको छ।
शेखलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरको टोलीले आइतबार पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको जिम्मा लगाएको थियो। कटहरीबाट पक्राउ परेका उनको साथबाट आठ ग्राम लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन) बरामद भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो र उच्च गुणस्तरमध्येको मानिने लागुऔषध ब्राउन सुगर किनबेच गर्दा तौल लिन प्रयोग गरिने मेसिन पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीकाअनुसार लागुऔषधका कारोबारी रहेका शेख ब्राउन सुगर बिक्री गर्न जाँदै गरेका बेला पक्राउ परेका हुन्।
त्यस्तै चौधरी विराटनगरको बरगाछीबाट लागुऔषधसहित आइतबार पक्राउ परेका हुन्। उनको साथबाट लुपिजेसिक, डाइजेल्याब, एभिल, फेनारगनसमेतका लागुऔषध प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुवै जनाविरुद्ध लागुऔषध ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीले म्याद थप गर्न उनीहरुलाई सोमबार एउटै हतकडी लगाएर अदालत उपस्थित गराएको हो।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईका अनुसार अदालतले पाँचरपाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइसकेपछि फर्काएर प्रहरी कार्यालय ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा झुक्याएर दुवै जना फरार भएका हुन्। ‘म्याद थप भएपछि भोक लागेकाले चियानास्ता गर्ने प्रस्ताव उनीहरुले राखेसँगै हतकडी खोलेर अदालत परिसरमै रहेको क्यान्टिनमा पुर्‍याइयो। खाजा खाइरहेका उनीहरु केही बेरमा हेर्दा त्यहीँबाट फरार भइसकेका रहेछन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘दुई जनामध्ये एक जनालाई खुला छाडिएको थियो। एक जना भने हातमा झुन्डिएको हतकडी नै लिएर फरार बनेका छन्।’
थुनुवालाई क्यान्टिनमा खाजा खाने व्यवस्था गरेको प्रहरीले निगरानी नगर्दा उनीहरुले भाग्ने मौका पाएको बताइएको छ। गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न थुनुवा फरार हुनु र उनीहरुमाथि प्रत्यक्ष निगरानी नबढाइनुलाई प्रहरीको लापरबाहीका रुपमा लिइएको छ।
खाजा खानुअघि उनीहरुले प्रहरीको मोबाइल मागेर केही व्यक्तिहरुलाई फोन पनि गरेको खुलेको छ। आफन्त र परिवारका सदस्यलाई फोन गर्ने भनेपछि म्याद थप गर्न लिएर गएका प्रहरीले मोबाइल उपलब्ध गराएर फोन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको स्रोतले बतायो। फोनमार्फत सम्पर्कमा रहेकालाई बोलाएपछि ति व्यक्तिकै साथ लागेर उनीहरु फरार भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
अदालतमा सोमबार ११ जना थुनुवा लगिएकोमा अरु नौ जनालाई भने म्याद थप गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय फर्काइसकिएको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेका कारण फरार भएका दुई जनालाई भने अदालतमै राखेर ढिला गरी म्याद थप गरिएको प्रहरी स्रोतले बतायो।
गम्भीर लापरबाहीका कारण घटना भएको पाइएपछि घटनास्थल मुचुल्का उठाएर थुनुवा फरार प्रकरणको अनुसन्धान थालिएको जानकारी डीएसपी राईले दिए। उनका अनुसार म्याद थप गर्न लिएर गएका र लापरबाही गरेको देखिएका केही प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुमाथि सोधपुछ र छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ।
विशेष समिति नै बनाएर घटनाको छानबिन एवं अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,’ राईले भने, सबैतिर नाका सिल गरेर फरार भएकाहरुको खोजी पनि तीव्र पारिएको छ।’
भागेको १८ घण्टाभन्दा बढी समय भइसके पनि उनीहरु पक्राउ परेका छैनन्। डीएसपी राईका अनुसार दुवै जना कतातिर र कसरी भागे भन्ने यकिन हुन सकिरहेको छैन। भागेकाहरुले गरेको फोनको कल डिटेल्स पनि अध्ययन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
हेटौंडा अस्पतालका चिकित्सकको मनोमानी कहिलेसम्म ?
वडाअध्यक्ष कान्छाराम रुम्बा ३ हजार धरौटीमा रिहा
रुबिनाले जितिन् ‘बिग बोस’, हात पारिन् ३४ लाख भारु
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको रणनीति
नेकपा दाहाल–नेपाल समूह मकवानपुरको अध्यक्षमा सिग्देल, सचिवमा पुलामी
हेटौंडाको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र फागुन १४ गते शिलान्यास हुँदै